मार्सीलमा सर्वश्रेष्ठ समुद्री तटहरू यात्रा समाचार
मार्साइलमा सर्वश्रेष्ठ समुद्री तटहरू
मारिएला क्यारिल | | सामान्य
फ्रान्सको सबैभन्दा प्रसिद्ध शहर मध्ये एक मार्सिले हो। यो बारे मा छ देशको दोस्रो ठूलो शहर र यो भूमध्यसागरको ढोकामा सुन्दर दक्षिण तटमा अवस्थित छ।
मार्सिले लामो समयदेखि महत्त्वपूर्ण शहर बनेका छन् किनकि रोमन कालदेखि यो एउटा मूल्यवान् वाणिज्यिक बन्दरगाह थियो, तर आज हामी यसको समुद्री तटमा चासो राख्छौं। सायद शहर नै समुद्री तटको पर्यटनका लागि मक्का होइन तर यसले यसको तटवर्ती क्षेत्रमा बिभिन्न समुद्र तटहरू प्रदान गर्दछ, त्यसकारण हामी हेरौं जुन मार्साइलमा सर्वश्रेष्ठ समुद्री तटहरू हुन्.
1 मार्सिले, एक समुद्र तट गन्तव्य
2 प्लेज डु प्राडो
3 प्लाज डेस क्याटालान्स
4 प्लेट डे ला पोइन्टे रुज
5 क्यासिसमा क्यालक्याकहरू
मार्सिले, एक समुद्र तट गन्तव्य
सायद समुद्रको किनार वा ग्रीष्मको बारेमा सूर्य र समुद्रको किनारमा कुरा गर्दा हामी सायद मार्सिलेको बारेमा सोच्न सक्दैनौं। सत्य यो हो कि यो एक विशाल समुद्री तट शहर हो जहाँ धेरै बासिन्दाहरू र शहरी जीवन छन्यो एक स्पा को शान्ति वा राखिएको पछि जीवन देखि टाढा छ।
तर मार्सिले छ विभिन्न शैलिका धेरै समुद्र तटहरू त्यसैले त्यहाँ पर्यटक को हर प्रकार को लागी एक छ। यी समुद्र तटहरू मध्ये धेरै बच्चाहरूसहित परिवारसँग जानको लागि उत्कृष्ट छन्, अरूहरू बार र रेष्टुरेन्टहरूमा रमाइलो गर्न, अरूहरू अधिक टाढा र चट्टान हुन्छन् र अरूहरू स्केटबोर्डि or वा सर्फिंग जस्ता खेलकूदको लागि उत्कृष्ट हुन्।
साथै, त्यहाँ प्राकृतिक समुद्र तटहरू पनि छन् त्यहाँ कृत्रिम तटहरू छन् यद्यपि उत्तरवर्ती क्षेत्रहरू L'Estaque को जिल्लामा अधिक स्थित छन्। अवश्य पनि, तपाईंले फ्रान्सेली रिभिएराको सेतो बालुवाको बारेमा बिर्सनु पर्छ। यहाँ यस्तै छैन।
समुद्रमा नुहाउने आधिकारिक मौसम जूनको सुरूमा आधिकारिक रूपमा खुल्छ र अगस्टको अन्त्यसम्म, सेप्टेम्बरको सुरूसम्म जारी रहन्छ। जुनदेखि यता त्यहाँ धेरै पर्यटक समुद्री किनारमा लाइफगार्डहरू छन् तर धेरै जसो क्यालान्कहरूमा होइन।
प्लेज डु प्राडो
कुनै श doubt्का बिना यो छ मर्सिलमा सबैभन्दा लोकप्रिय समुद्री तट र सहरको पहुँचको साथ एउटा जुन तपाईं जुनसुकै ठाउँमाबाट जुन बस वा ट्याक्सीबाट आइपुग्नुहुन्छ। बार र रेस्टुरेन्टहरू छन् तपाईं २००ly मा फिफा बीच सॉकर कपका आयोजकहरू द्वारा छोडेको खेल अभ्यास गर्न बालुवा र धेरै विस्तृत क्षेत्रमा साघुँरो रोक्न सक्नुहुन्न।
यी सुविधाहरू पाउँदा त्यहाँ सधैं मानिसहरू हुन्छन् र एक्लो हुनु धेरै गाह्रो हुन्छ। अझै, गर्मीमा पनि, यसमा अन्य फ्रान्सेली समुद्री तटहरू भन्दा कम पर्यटकहरू छन्। पानी स्पष्ट छ, यदि तपाई पौडिन सक्नुहुन्छ र समुद्रमा धेरै मानिसहरु छैन भने सर्फ पनि गर्न सक्नुहुन्छ।
मूल रूपमा प्राडो से उत्तर र दक्षिणमा विभाजित र समूहले समुद्री तट पनि समावेश गर्दछ l'Huveaune र स्केल बोर्ली र त्यो बोन्नेभिन.
ला प्राडो नोर्टे दक्षिणी खाडीमा समुद्री किनार छ, जहाँ ढुb्गाहरू छन्, र पौडी खेल्न र पैदल यात्राको लागि उत्कृष्ट छ। प्राडो सुर बप्तिस्मा लिएको थियो ले डेभिड र सूर्यास्तमा टहल्न छानिएको छ। ल ह्युवेनको समुद्री किनार बलुआ छ र यो डे आधा घण्टा ले डेभिडबाट छ र अन्तिम दुई ल ह्युबियन नजिकैको समुद्र तट हो र यसमा धेरै निजी तटहरू छन्।
१ 1975 .XNUMX मा मार्सिले सिर्जना गरे प्राडो कोस्टल पार्क, २ hect हेक्टर ज fore्गलहरू १० हेक्टेयर समुद्री किनारको साथ दुई किलोमिटर लामो। Hect० हेक्टर समुद्रबाट पुनः प्राप्त गरियो तर यो यसको लागि लायक थियो किनकि ग्रीष्म पर्यटनमा समर्पित नयाँ ठाउँ सिर्जना गरिएको थियो। यो यहाँ छ जहाँ हामीले उल्लेख गरेका अन्तिम समुद्री तटहरू अवस्थित छन्।
प्लाज डेस क्याटालान्स
यो पनि धेरै लोकप्रिय बीच हो किनभने यो मार्सेलीको पुरानो पोर्टको नजिक छ तर यो सूर्यकाथ वा विश्रामको लागि उत्तम होइन। यो प्राडो र पोर्टको बीचमा अवस्थित छ, उत्तर तर्फ बढ्दैछ, र क्यास्टिलो डिफको खाडीमा राम्रो विचारहरू छ।
यो समुद्री तट हो जुन पछि विन्डसर्फि practice्ग अभ्यास गर्नेले छान्छन् त्यहाँ राम्रो छालहरू छन्, जाडोमा त्यहाँ राम्रो मानिसहरू छन्, र यो छ रेस्टुरेन्ट, सार्वजनिक वर्षा र अन्य सुविधाहरू। यसको पछाडि यो छ समुद्र तट भविष्यवक्ता, समान सुविधाहरूको साथ, र यहाँ आइपुग्नु अघि यो छ des भ्यालन्स, रेतको लामो पट्टी जुन राजमार्गबाट ​​पहुँच गरिएको छ, मालेकन जेएफ क्यानेडी। दुबै बस 83 XNUMX बाट आइपुगेका छन्।
प्लेट डे ला पोइन्टे रुज
मार्सिलेसँग धेरै ढुb्गा समुद्री किनारहरू छन् तर यो यो एक बालुवा समुद्र तट हो। यो सहरको दक्षिण हो र यदि तपाईं बच्चाहरू हुनुहुन्छ भने यो उत्तम छ। यो एक पारिवारिक समुद्र तट हो धेरै आरामदायक, शान्त तरंगहरू र समुद्री सतहको साथ कि तल सजिलै तल जान्छ पानी सामान्य तातो छ.
गर्मी मा तिनीहरू सशस्त्र छन् साधारण खाना स्टालहरू र रेस्टुरेन्टहरू सम्पूर्ण समुद्री तटमा यदि तपाईं कारबाट आइपुग्नुभयो भने यो पार्क गर्न गाह्रो हुनेछ। प्याडल डु rent्गा भाँडामा लिन वा कइटसर्फि try गर्न प्रयास गर्नु यो राम्रो समुद्री तट हो।
त्यहाँ लाइफगार्डहरू र शावरहरू पनि छन्, तर केवल उच्च मौसममा। नजिकै त्यहाँ मुट्ठी भर रोचक समुद्र तटहरू छन्, जस मध्ये म यो हाइलाइट गर्न चाहन्छु अब्री कोटिअर, एक सानो र शान्त समुद्र तट एक सीढी द्वारा पहुँच।
यो साँघुरो तर सुन्दर छ र La Pointe रुज र सानो समुद्र तट भनिन्छ पछि मात्र अवस्थित छ बेन डेस डेमहरू.
क्यासिस एउटा सानो शहर हो जुन मार्सेलीको नजिक छ, यो ठाउँ छनौट गर्नुहोस् जब मानिसहरू शोर र भीडबाट टाढा हुन चाहन्छन्। त्यहाँ धेरै छन् क्यालक्याकहरू र क्यासिस सबैभन्दा प्रसिद्ध छ।
क्यालक्याकहरू सानो fjord जस्तै हुन्, हडताल गर्ने चुनढुंगाका चट्टानहरू जुन नीलो समुद्रमा उत्कटतासाथ डुब्छन् र शानदार परिदृश्यहरू र प्यारा सानो समुद्र तटहरू सिर्जना गर्दछ।
क्यासिसको समुद्री तट लोकप्रिय छ र त्यहाँ दुई विशेष गरी मानिस आकर्षित गर्छन्: डी 'एन-भि र पोर्ट पिनकोदुबै चट्टानहरूले घेरिएका छन्, त्यसैले यदि तपाईं चाँडै आइपुग्नुभयो भने तपाईंसँग धेरै व्यक्तिहरू हुनेछैन किनकि त्यहाँ केवल अधिक ठाउँ छैन।
क्यासिसमा अर्को सुन्दर समुद्र तट हो जुन ठूलो Mer। यो शहरको नजिकको मुख्य समुद्र तट हो र यसमा नरम रेती र किनारमा अवस्थित पेस्टल रंगीन घरहरूको एक सुन्दर वास्तुकला छ। यो मार्सेली जत्तिकै टुरिस्ट होइन तर ग्रीष्म inतुमा मानिसहरू छन्।
यी मार्सिलेका सबै भन्दा सिफारिस गरिएका समुद्री किनारहरू हुन्, तर ठूला नामहरू भन्दा पर घास धेरै कम ज्ञात तटहरू मार्सिलेको विशाल तटसँग जान्न जुन उत्तरबाट दक्षिणमा जान्छ र चट्टान भागको बीचमा वैकल्पिक, बालुवा वा कंकडहरू सहित।
सँधै याद राख्नुहोस् कि दक्षिणतिर क्यालेनक्स मासिफ यसका टापुहरू र कोभहरू, सुन्दर गन्तव्यहरू सहित छन्। गर्मी र वसन्तमा कारहरूको संचलन प्रतिबन्धित छहो, हो समुद्री तटको वरिपरि घुम्नको लागि बस छ।
वास्तवमा प्रत्येक मार्सिले समुद्री किनारहरु बसमा पुग्न सकिन्छ र ग्रीष्म inतुमा वर्षका अन्य समयहरू भन्दा बढी सेवाहरू छन्। अप्रिल र सेप्टेम्बरको अन्त्य बीचमा यातायातको अर्को साधन थप गरियो: डु boats्गा वा बाटोबस जुन अधिक दुर्गम समुद्र तटहरूमा पुग्नको लागि उत्तम हो। तिनीहरू पुरानो पोर्ट र पोइन्टे रुज बीच जान्छन्।
जुन को अन्त्य र सेप्टेम्बर को अन्त्य बीच, त्यहाँ एक विस्तारित सेवा छ जुन पोइन्ट रुगदेखि लेस गौडेस सम्म चल्छ। यो मार्सैलीको समुद्री तटहरूको मात्र एक झलक हो, तपाईंको गन्तव्य यही हो जुन तपाईले के गर्न चाहानुहुन्छ उत्तम सूट गर्दछ मेरो सल्लाह भनेको तपाईको अनुसन्धान गर्नुहोस्, बिभिन्न समुद्री तटहरू छान्नुहोस्, आरामदायी ब्याकप्याक राख्नुहोस् र यात्रा गर्न तयार हुनुहोस् मार्सिलेसको समुद्री किनारमा बस।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » सामान्य » मार्साइलमा सर्वश्रेष्ठ समुद्री तटहरू
जोर्डनमा हेर्न र गर्न को लागी चीजहरू